Ganacsatada Boosaaso oo maanta iskugu timid kulan Lacag uruurin ah +Sawiro – SBC
Ganacsatada Boosaaso oo maanta iskugu timid kulan Lacag uruurin ah +Sawiro
Kulan ay soo qaban qaabisay rugta ganacsiga Puntland oo lacag loogu uruurinayo Dadkii wax ku noqday Dabkii Boosaaso ayaa Maanta lagu qabtay Magaalada Boosaaso.
Kulanka ayaa waxaa lagu soo bandhigay tiro koob ka tarjumada dadka halkaas ku hanti beelay kuwaasi oo ay rugta ganacsigu ka sameysay Buug.
Kulanka waxaa lagu martiqaaday shirkadaha waaweyn ee ku yaal Magaalada Boosaaso waxaana goob joog ka ahaa Madax ka socotay Rugta Ganacsiga Xildhibaano ka tirsan Gobolaha Degaanka Degmada Boosaaso,.Culimo,Odayaal.Ganasato iyo qaybah kala duwan ee bulshada .
Ugu horayntii waxaa halkaa ka hadlay Maxamed Cali Caydiid oo isagu ah gudoomiye ku xigeenka Rugta Ganacsiga waxaa uu war bixin kooban ka bixiyay tira koob ay sameeyeen oo ku aadanaa khasaarihii ka dhashay dabkii ka kacay suuqa wayn ee Magaalada Boosaaso warbixintaa oo ahayd mid ay ka sameeyen buug isla markaana ay ku ururiyee xaaladii ka dhacday suuqa .waxaana uu sheegay in ay tan u sameeyen sidii ay ku ogaan lahayeen xaqiiqada ku sabsan suuqa.
Gudoomiye ku xigeenka rugta ayaa dhinaca kale waxaa uu sheegay inay tiro koob ku sameeyeen Guryo, Sandaqado,Kabro ganacsi,IWM taasi oo keenaysa Xaqiiqda qasaaraha Dabka.
Warbixinta Gudoomiye ku xigeenka ka dib waxaa la bilaabay lacag uruurin ay sameynayeen Dadkii ka soo qeybgalay kulanka qadad ah ee Maanta lagu qabtay Hotel Juba ee Magaalada Boosaaso waxaana Ugu ay bilaabeen shirkadihii iyo shaqsiyaadkii joogay inay lacago bixiyaan halka qaar kalena ay balanqaadeen inay bixin doonaan wixii karaankooda ah.
Kulanka lacagta lagu uruurinayay waxaa joogay culimo uu ka mid yahay Sheekh Axmed Daahir Aw-Cabdi oo dadkii Madasha fadhiyay ku baraarujiyay Qiimaha ay leedahay in muslimiintu is taakuleeyaan iyo inay muhiim tahay in wax lagu sadaqeysto qof aan waxba haysan sida dadkii suuqa boosaaso uu ka gubtay oo kale.
Culimada ayaa ku baaqaday in dadka sakada la baxaya ay muhiim tahay inay ku sadaqeystaan ama siiyaan Sakawaadka Dadka hantidooda ku basbeeshay.
Kulanka manta la qabtay ee wax loogu uruurinayo dadkii dadbku hanti tiray waxaa uu ka mid noqonaya kulamo xiriir ah oo culimada iyo dad u istaagay caawinta dadkaas ay mudooyinkan ka wadeen Magaalada Boosaaso sida Masaajidada,iyo Idaacadaha barnaamijyo lacag uruurin.
Dadka hantidooda ay ku gubatay suuqa Boosaaso ayaa rajo wanaagsan ka qaba in dadka reer Puntland ee Gudaha iyo dibadaba ay u kaalmeyn karaan iyadoo aan loo baahan kaalmo dibadeed.
Axmed Maxamuud Nuune